Mba ho fitandroana ny filaminana eny anivon’ny fiarahamonina no anton’io, ary mety miteraka fahasorenana ho an’ny rehetra rahateo, ankoatra ny mety ho fifangaroany amin’ny feom-basin’ny jiolahy manafika, ohatra. Saika ny ankamaroan’ny olona no mankasitraka ny fandrarana. Na izany aza, dia misy tsy fahamatoran’ny fanjakana. Mampidi-bola ao anatin’ny kitapombolam-panjakana amin’ny alalan’ny ladoany ny fampidirana azy ireny eto. Azo natao ny namoaka didim-panjakana nialoha nandrara ny fanafarana azy, izay ny sinoa no tena maro manao azy. Azo nogiazana dieny mbola teny amin’ny ladoany, mba hahafaha-mifehy azy kokoa. Tsy niraika tamin’izany ny mpitondra, fa toa manao dokotera aorian’ny fahafatesana. Fatiantoka ho an’ny mpanafatra sy ny mpaninjara mba saika haka tombony efa nanitsoka ny volany izany. Porofon’ny tsy fahaiza-mitantana sy petatoko hatrany io.